Maxay Kheyre iyo Mursal ka wada hadleen xalay? – Kalfadhi
Maxay Kheyre iyo Mursal ka wada hadleen xalay?
December 18, 2018 December 18, 2018 Kalfadhi
Xukummadda Soomaaliya ayaa hadda ka dooneysa Golaha Shacabka wada shaqeyn, kadib xiisado khilaaf xoogan dhaliyey, oo ilaa bishii hore hareeyey Golayaasha Shacabka iyo Fulinta. Kulan ay xalay ku yeesheen Muqdisho Guddoomiyaha Golaha Shacabka, Maxamed Mursal Cabdiraxmaan iyo Reysal Wasaaraha Soomaaliya, Xasan Cali Kheyre, ayaa, sida ay qortay SONNA, waxaa looga hadlay dejinta xiisadaha siyaasadeed ee taagan hadda.
“Guddoomiyaha Golaha shacabka ee Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan iyo Reysal Wasaaraha XFS Mudane Xasan Cali Khayre oo Caawa Kulan yeeshay ayaa isku fahmay dhameynta xaaladaha hadda jira” ayaa lagu yiri war xalay gelinkii dambe lagu daabacay SONNA.
Waxyaabaha la tuhunsan yahay iney Reysal Wasaaraha iyo Guddoomiyuhu ka wada hadleen waxaa ka mid ah Mooshinka ka dhanka ah Madaxweynaha iyo War-bixinta Miisaaniyadda 2018-ka ee uu labadaba ogolaaday Guddoomiye Mursal. Lama ogaan wali go’aannada rasmiga ah ee ay isla gaareen, laakiin waxa uu Reysal Wasaaruhu ka doonaya Golaha Shacabka iney Xukumaddiisu si dhaw u wada shaqeeyaan, sida ay qortay SONNA.
“Sidoo kale, Guddoomiyaha Golaha Shacabka Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan iyo Reysal Wasaaraha Xukuumaadda Federaalka Soomaaliya ayaa ka wada hadlay xoojinta wada shaqeynta Laamaha Sharci dajinta iyo Fulinta” ayaa lagu yiri warka ay SONNA ka qortay kulanka Hogaamiyayaasha Golaha Shacabka iyo Xukumadda.
Reysal Wasaare Kheyre waxaa war kooban oo uu Feysbuuggiisa ku soo qoray xalay ku yiri “waxa aan caawa kulan la qaatay Guddoomiyaha Golaha Shacabka Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan, oo aan ka wada hadalnay xoojinta wada shaqeynta Xukuumadda iyo Golaha Shacabka”.
Kulanka uu Reysal Wasaare Kheyre xalay la qaatay Guddoomiyaha Golaha Shacabka, Maxamed Mursal, waxa uu ka dhacay Wasaaradda Tacliinta Sare iyo Hiddaha. Waxa uu qaatay saacado fara badan, waaxana intaas ay ciidanku xayireen dhamaan dhaqdhaqaaqyada waddooyinka nawaaxigaas mara, oo gaadiidka loo diiday, dadkana laga xakameynayey.
Xildhibaanno ku baaqay in la aqbalo dib u dhigista Doorashada KGS
Ambaasador Yuusuf Garaad: Ilama qummana isku dayga Madaxweyne Farmaajo lagu ridayo